शिवपुरी अध्यक्ष गोल्डकप वि.न.पा. क्वाटरफाइनलमा प्रवेश - PT Online News
केपीले महन्थ ठाकुरहरुसँग मिलेर सरकार टिकाउन खोजेको घनश्याम भुसालको आरोप
शिवपुरी अध्यक्ष गोल्डकप वि.न.पा. क्वाटरफाइनलमा प्रवेश
२० चैत्र, २०७७ २२:१८
विदुर नगरपालिका शिवपुरी अध्यक्ष गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
तादी गाउँपालिकामाथि ५–० को फराकिलो जीत हासिल गर्दै विदुर नगरपालिका क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । खेलमा विदुर नगरपालिकाका आकाश रानामगरले ह्याट्रिक गरे । उनले खेलको १२ औं, ३० औं र ५० औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । विदुर नगरपालिकाका लागि साहिल नगरकोटीले २७ र ३१ औं मिनेटमा गोल गरे । खेलमा आकाश रानामगर म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
त्यसैगरी शुक्रबारको दोस्रो खेलमा ककनी गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाले २/२ गोलको बराबरी खेले । ककनी गाउँपालिकाले पहिलो हाफमा २ गोल गरेर अग्रता लिएको थियो । ककनीका लागि ७ औं मिनेटमा विश्वास तामाङ र २९ औं मिनेटमा सुशिल तामाङले गोल गरेका थिए ।
तर दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको तारकेश्वरले २ गोल फर्कायो । तारकेश्वरले २ मिनेटमा २ गोल गरेको थियो । रोशन लामाले ५१ औं मिनेटमा र ५२ औं मिनेटमा शिरिष तामाङले गोल गरे । बराबरीपछि तारकेश्वर र ककनीले एक÷एक अंक बाँडेका छन् । ककनी गाउँपालिकाका अशिम लामा म्यान अफ द म्याच घोषित भए। लिगको आफ्नो दोस्रो खेलमा शिवपुरीले पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई ४–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेपछि समूह ए को विजेता बन्दै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । आजसम्म ७ म्याच सम्पन्न भएको छ । यो समाचार डबली खबरमा प्रकाशित गरिएको छ।
मैदानमा देखिएका रौनक दृश्यहरु:
मुम्बई ईन्डियनले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई १० रनले हरायो
आईपीएल टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा पन्जाबको विजयी सुरुवात,राजस्थान रोयल्स ४ रनले पराजित